ရေမုန့် | Wutyee Food House
« အာလူး ပူတီ၊ ချာပတီ
December 7, 2011 by chowutyee ရေမုန့်
ဒီနေ့တော့ နေ့လည်စာ ရေမုန့်ကို အစာပြေလုပ်စားဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ရတာ ထင်သလို မခက်ပဲ၊ အရမ်းလွယ်တာမို့ ချက်နည်းလေးပါ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်…
၁။ ဆန်မှုန့် – နို့ဆီဗူး ၂ဗူး
၂။ ရေ – နို့ဆီဗူး ၅ဗူး
၃။ ပဲပြုတ် – ၅ကျပ်သား
၄။ ကြက်သွန်မြိတ် – ၂စည်း (ပါးပါးလှီးထားပါ)
၁။ အရင်ဆုံး ဇလုံတစ်ခုထဲတွင် (ဆန်မှုန့်၊ ရေ၊ ဆား) တို့ကို သမအောင် ရောမွှေထားလိုက်ပါ။
၂။ ပြီမှ ဒယ်(Non Stick Pan)ထဲ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း)ခန့် ဒယ်ထဲသို့ ထည့်ပေးပါ။
၃။ ဆီပူလာလျှင် မီးကို လျှော့လိုက်ပြီမှ ဆန့်မှုန့်ရည်(ယောက်ခွက်တစ်ဇွန်းစာ) (ဒယ်အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍) ထည့်ပေးပါ။
၄။ ထို့နောက်အပေါ်မှ ပဲပြုတ်၊ ကြက်သွန်မြိတ်ကလေးများ အမြန်ဖြူးပေးပါ။
၅။ ရေမုန့်ဘေးသားများ ကြွပ်လာသည်အထိ မီးအသင့်တင့်ဖြင့် ကြာကြာထားပေးပါ။
၆။ ရေမုန့် ဘေးသားများ ကြွပ်လာပြီဆိုမှ ရေမုန့်ကို တ၀က်ခေါက်ပြီ စားသုံးနိုင်ပါပြီ…
Posted in -မြန်မာ ချက်ပြုတ်နည်းများ | 41 Comments	41 Responses
on December 7, 2011 at 6:50 am | Reply dkfjekrli
m eating all now, heehee! thanks alot wutyee. wanna eat ရေမုန့် since last over 2years ago. thanks for sharing cooking method.
on December 7, 2011 at 6:56 am | Reply yuki
thanks for your new post..i’ll be make this weekend.
on December 11, 2011 at 10:09 am | Reply chowutyee
on December 7, 2011 at 7:03 am | Reply moesat
Thank you so much!.This week I’ll try
on December 11, 2011 at 10:08 am | Reply chowutyee
Plz try it…
on December 7, 2011 at 7:33 am | Reply မချော
ဒီလောက်လွယ်မှန်းသိရင် လုပ်စားပြီးသားဘဲ.. အရမ်းကြိုက်၏. ကျေးဇူးဘဲညီမရေ
on December 7, 2011 at 7:41 am | Reply jue
on December 11, 2011 at 10:07 am | Reply chowutyee
on December 7, 2011 at 8:39 am | Reply ခင်လေးနွယ်
စားချင်နေတာ။ လုပ်နည်းသိသွားပြီ။ ကျေးဇူးဘဲနော်။
on December 11, 2011 at 10:04 am | Reply chowutyee
Plz try it !!😀
on December 7, 2011 at 9:33 am | Reply Cho Wut Hmone
seem easy to make…i will try sometimes too thx you for sharing my twin…i wanna eat urs cooking too🙂
on December 11, 2011 at 10:03 am | Reply chowutyee
Ok try it hmone gyi, U miss it, right?😀
on December 7, 2011 at 9:51 am | Reply ခင်ယမုံ
ရေမုန့်ကိုသိပ်ကြိုက်ပေမယ့် ပဲပြုတ်က ရှာရခက်ပါဘိကွယ်..
အခုတော့ ညီမလေးလုပ်ထားတာတွေ အကုန်စားသွားပြီ..🙂
ပဲပြုတ်လုပ်နည်းလေးပါ ၀တ်ရည် တင်ပေးထားပါတယ် ။အဆင်ပြေရင်တော့ လုပ်စားကြည့်ပါနော်😛
on December 7, 2011 at 11:42 am | Reply မမိုး
on December 11, 2011 at 10:02 am | Reply chowutyee
on December 7, 2011 at 1:41 pm | Reply မြတ်
ဒီကို ရောက်ကတည်းက ဗမာအစာအစားမစားရတာကြာပေ့ါ၊ ပဲပြုတ်ကလည်းရှားမှရှားဘဲ ၊ ညီမလေးရဲ့မုန့်ကိုဘဲ အ၀စားသွားတယ်နော်
on December 11, 2011 at 10:01 am | Reply chowutyee
on December 7, 2011 at 3:42 pm | Reply dare
Thanks so much Wutyee!! I luv it, and miss it so much!
on December 11, 2011 at 10:00 am | Reply chowutyee
on December 7, 2011 at 6:00 pm | Reply moe
ဒီတစ်ပတ်ပိတ်ရက်မှာ လုပ်စားမယ် ပဲပြုတ်ရှိတဲ့နေရာကို သတင်းရထားပြီးပြီ
ကျေးဇူးပါ ၀တ်ရည်ရေ ခုလောလောဆယ်တော့ ………………….. ရှလွတ်..ဂလု
on December 11, 2011 at 9:59 am | Reply chowutyee
on December 8, 2011 at 7:55 am | Reply လမင်း
ဟုတ်ကဲ့ ဖျော်ပြီခြင်း လုပ်စားလို့ရပါတယ်။ ကြာကြာစိမ်ရင် အနည်းကျသွားတာမို့ ပြန်မွှေပေးမှာပါ..
on December 8, 2011 at 8:54 am | Reply အဲကျဲ
on December 10, 2011 at 12:48 pm | Reply chowutyee
Plz try it..🙂
on December 8, 2011 at 8:28 pm | Reply ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
on December 10, 2011 at 11:30 am | Reply chowutyee
Plz try it ma chaw !🙂
on December 12, 2011 at 5:22 am | Reply အသဲ
၀တ်ရည်ရဲ့ နည်းအတိုင်း အိမ်မှာ လုပ်စားဖြစ်တယ်။ လုပ်ရတာလည်း လွယ်သလို။ အရမ်းလည်း စားလို့ကောင်းပါတယ်။…….
အသဲရဲ့ facebook wall ပေါ်မှာတောင်ပုံလေးတင်ထားပါသေးတယ်။
on December 12, 2011 at 5:44 am | Reply chowutyee
ဟုတ်လား။ facebook မှာကြည့်လိုက်မယ်.. ကျေးဇူးပါ
on December 19, 2011 at 2:29 pm | Reply Amber May
love it ! thanks for posting such great recipes !😀
You r welcame, sis!!!😀
on March 6, 2012 at 8:18 pm | Reply mu yar
ညီမရေ အမကို မုန့်ကျွဲသဲလုပ်နည်းလေးကို ပြောပြပေးပါလား။ အမက ဗမာမုန့်တွေဆိုအားလုံးကြိုက်တယ်။ မလုပ်တတ်သေးတာလဲ စမ်းလုပ်ကြည့်နေပါတယ်။ ဘိန်းမုန့်လုပ်နည်းလေးလည်း ပြောပေးအုံးနော်။ ပြန်စာမျှော်နေမယ်
on March 7, 2012 at 3:57 pm | Reply chowutyee
၀တ်ရည် ဟင်းချက်မိတ်ဆွေ မအေးခိုင်ရဲ့ ဘိန်းမုန့် လုပ်နည်းလေး ပြန်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..
(၁) pan cake flour mix21/2cups – ဆန်မှုန့် 1/2cupကို ကြက်ဥ၂လုံး ၊ နွားနို. 2cup. ထန်းညက်ရည် ထမင်းစား ဇွန်3းဇွန်း ၊ ထောပတ် ထမင်းစား ဇွန်း ၃ ဇွန်းတို.ကို သမအောင် ရောူပီး ခပ်ပြစ်ပြစ် ဖျော် ထားပါ
(၂) non stick fry pan အသေးကိုဆီသုပ်ပေးပြီး အပူပေးပါ.(မီးသိပ်မပြင်းပါစေနှင့်)မုန့်နှစ်ရည် ကိုလိုသလောက်ထည့်ပါ
(၃) မုန့်နှစ်ရည်ပေါ်သို ဘိန်းစေ့ နှင့်အုန်းသီးတို့ကိုလည်းတခါတည်းထည့်ပါ.
(၄) မုန်သားအရာင်ပြောင်းသွားရင် မုန့်လေးရပါပြီ.
on March 7, 2012 at 8:39 pm | Reply mu yar
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အချိန်ရသေးရင်လည်း မုန့်ကျွဲသဲလေး ပြောပြအုံးနော်။ လုပ်စားခင်လို့
on March 23, 2012 at 5:47 pm | Reply mu yar
အမလေ – ရေမုန့်လုပ်စားပြီးသွားပြီ။ ပုံလေးတင်ပြီးပြချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ( သိပ်ကျွမ်းတော့) ဓာတ်ပုံကို ဘယ်လိုတင်ရမှန်းမသိဘူး။ အမလုပ်တာမုန့်ရေထည့်တဲ့အချိန်မှာ အပေါက်လေးတွေဖြစ်တယ် ဘာလို့လဲဟင် စားလို့တော့ကောင်းတယ် လွယ်လဲလွယ်တယ်။ ကျွတ်တော့ကျွတ်တယ်။ မမရဲ့ ချစ်ချစ်ကတော့အားပေးတယ် (he he )
ညီမ မုန့်ဖတ်ထုတ်ရော နည်းပေးချင်လားဟင်။ လုပ်စားချင်လို့။
ရေခပ်ကျဲကျဲလေး ဖြစ်လို့ပါ။ စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုလို့ ၀တ်ရည်တောင် စားချင်လာပြီ… ဟုတ် မမူယာ နောက်ပိုင်း မြန်မာမုန့်လုပ်နည်းတွေ ပိုတင်သွားပါ့မယ်နော်.. ကျေးဇူး😛
on March 31, 2012 at 4:54 pm | Reply mu yar
အမလေ facebook မှာ တင်ထားတယ်။ ညီမကြည့်ပါလားဟင်။ အမရဲ့ ac က khin mu yar soe ပါနော်။
ညီမနဲ့ခင်မင်ရလို့လဲဝမ်းသာပါတယ်နော်။ ညီမရဲ့ ချက်နည်းလေးတွေလည်းကြည့်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မြန်မာမုန့်မျိုးစုံကိုလည်း မျှော် လင့်နေပါတယ်🙂 ပြောရတာအားလည်းနာတယ်နော်
on April 3, 2012 at 3:51 pm | Reply chowutyee
ဟုတ်မရေ ခုပဲ ၀င်ကြည့်လိုက်တယ်.. ခုမှပဲ နံမည်နဲ့လူနဲ့တွဲမိတော့တယ်… ဖေ့ဘုတ်ကနေ ရေမုန့် အားပေးလိုက်မယ်နော်..😀
on April 26, 2012 at 7:49 am | Reply wooem
i tried n it was successful. thx. here is the photo😀
on April 28, 2012 at 7:38 am | Reply chowutyee
Wooo. Look so yummy!!!😛